Kormeerka Tayada Shiinaha ee Shiinaha Saqafka Ilkaha Furitaanka Hawo-Warshada Warshadda-PMS001 Warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Aixiang
Nooca Saw-Ilkaha ee Warshada Warshadaha Badan
Kormeerka Tayada ee Shiinaha Wuxuu Arkay Saqafka Ilkaha Furitaanka Hawo-Warshadda Guryaha-PMS001 ee Ballaadhan
Guriga lagu koriyo ee ilkaha lagu sawiro wuxuu leeyahay laba nooc: ilig-weyn oo ilkaha ah iyo ilig-miinshaar yar. Laakiin guud ahaan waxaan u isticmaalnaa wax ka badan waa koriyo-yar-yar oo ilkaha lagu arko. Guryaha lagu koriyo-ilkaha ayaa aad loogu jecel yahay gobolka lamadegaanka ah iyo aagga cimilada kulaylaha.
Guriga lagu koriyo ee ilkaha ayaa inta badan qaata hawo dabiici ah dhinacyada iyo xagga sare, hawada kulul ee hawada hawada qoyan ayaa si dhakhso ah looga daali doonaa dibadda, taasoo yaraynaysa heerkulka gudaha iyo huurka. Saameynta hawo-qaadashadeeda dabiiciga ah, aad bay uga fiican tahay aqalka dhirta-koriyo badan leh. Sidaa darteed heerkulka dibedda ee sannadlaha ahi waa aagag aad u sarreeya, gaar ahaan naqshadeynta aqalka dhirta lagu koriyo ma taageerto nidaamka hawo-mareenka qasabka ah ee farsameysan, aqalka dhirta lagu koriyo ee ilkaha ayaa ah qaab-dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo ee habboon.
Guryo-koriyo badan & Saw-ilig Guryo-koriin badan
Noocan ah aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu ku habboon yahay beero-baaxad weyn waxaana lagu qalabeyn karaa qalab kala duwan oo caqli badan oo casri ah si loo habeeyo heerkulka gudaha iyo qoyaanka si loola qabsado bay'ada koritaanka dalagyada, sidaasna lagu kordhiyo wax-soo-saarka dalagga.
Noocan ah aqalka dhirta lagu koriyo waa ka raqiisan yahay aqalka dhirta lagu koriyo dhalada iyo aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate, waxay ku yeelan kartaa acheive saamayn la mid ah wax kala duwan.
3. Qaar ka mid ah dhirta ubaxa ee u baahan heerkulka hawada sare ee bay'ada, aqalka dhirta lagu koriyo oo badan ayaa ku habboon koritaanka iyo kordhinta dhalidda. Jidhka ugu weyn wuxuu qaataa qaab galvanized ah oo kulul, kaas oo hagaajinaya dhererka nolosha.
4.Adeega iibka kadib wuxuu hayn karaa had iyo jeer, dhibaato kasta oo aad la kulanto si dhakhso leh ayaan kuugu xallin karnaa!
Qaabka Ballaca (m) Dhererka (m) Masaafada u dhaxaysa 2 arches (m) Dhererka Garabka (m) Dhererka saqafka (m)
AX-MF-006 6.0/6.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-007 7.0/7.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-008 8.0/8.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-009 9.0/9.5/9.6 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-010 10.0/10.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-011 11.0/11.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
AX-MF-012 12 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.0-9.0
Saw-ilig Guri-koriyo badan
AX-MS-F-006 6.0/6.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-007 7.0/7.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-008 8.0/8.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-009 9.0/9.5/9.6 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-010 10.0/10.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-011 11.0/11.5 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
AX-MS-F-012 12 Habee 1.0-3.0 2.5-5.5 4.6-8.3
Biibiile (Tuubo wareegsan/biibiile oval) Dabaysha Dabaysha Xamuulka Barafka Geedaha oo sudhan culeyska Roobab Daboolida filimka
Talooyin Guryo-koriyo badan leh
Farqiga u dhexeeya “Greenhouse Multi-span Greenhouse” iyo “Saw-tooth Multi-span Greenhouse”？
A waa nooc la casriyeeyay ee B. Waxaa laga arki karaa muuqaalka kore ee A wuxuu ka duwan yahay aqalka dhirta lagu koriyo ee caadiga ah. Waxaa loogu talagalay inay si fiican u ogaato hawo -qaadashada dabiiciga ah iyo qaboojinta.
Guryo-koriyo badan oo loola jeedo waxaa loola jeedaa aqalka-koriyo-baaxad-ballaadhan halkaas oo koriinno badan oo hal-taako ah ay si wadajir ah ugu xiran yihiin biyo-mareen.
Waa maxay codsiga?
Noocan oo ah aqalka dhirta lagu koriyo oo badan ayaa loo adeegsan karaa booqashooyinka iyo bandhigyada, iyo sidoo kale beerista beeraha. Caadiyan loo isticmaalo beerista khudaarta sida yaanyada iyo qajaarka, iyo sidoo kale beerista ubaxyada, waxaa wanaagsan in la isticmaalo nalal iftiin leh oo buuxsan.
Hore: Warshadda Jaban ee kulul Shiinaha Dhaqaale iyo Wax-ku-oolnimo Badan/Wakhti-Dheeraad ah Po/PE Greenhouse Film leh Beero aan Ciid lahayn si ay u koraan Tamaandho/Khudaarta/Trawberry/Pepper-PMD001
Xiga: In Stock Fast Delivery Beeraha Single-taako Caag Tunnel Strawberry Greenhouse Waayo Sale-PTD001
Aqalka dhirta lagu koriyo Sawtooth
Galaydhka Carro la'aanta ah Venlo Greenhouse Iyadoo Gudaha A ...
Nooca Dome Multi-taako Nooca Green-cad Film hadhka A ...
Venlo Multi-taako Commercial Glass Greenhouse, T ...
Qaboojinta Qaboojiyaha/Taageeraha Fidinta Wakhtiga Badan leh Circ ...
Aagga Baaxad Badan Hoyga Roobka Guryaha Guryaha-P ...
Soo -saaraha Greenhouse Event ee Shiinaha Waterpro ...